मानिस बाँदरभन्दा पनि नबुझ्ने जात भएपछि... - Dainik Online Dainik Online
मानिस बाँदरभन्दा पनि नबुझ्ने जात भएपछि…
प्रकाशित मिति : १५ फाल्गुन २०७६, बिहिबार ९ : २७
काठमाडाैं । ‘यसपालीको महाशिवरात्रिमा पशुपतिनाथ परिसरलाई फूल र प्रकाशले सजाउने सोँच आयो । अनि तत्कालै एउटा प्रश्न पनि तेर्सियो– बाँदरबाट कसरी जोगाउने होला ? त्यही पीरमा बसिरहेको थिएँ, फूलले त सजाउने तर शिवरात्रि पछाडि कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ ? अर्काे प्रश्न आयो । त्यस प्रश्नमा मेरो पहिलो जवाफ थियो– पहिले फूलको सौन्दर्यको आनन्द त लिउँ, सौन्दर्यको आनन्द लिनुभन्दा पहिल्यै फोहरको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा किन दिमाग खर्चिनु ? अब थाहा भयो, हाम्रा यी दुवै प्रश्न चिन्ता लिनै नपर्ने खालका रहेछन् । भगवान् श्रीपशुपतिनाथसँग प्रार्थना गर्दछु, हामीलाई सद्बुद्धि दिनुहोस् ।